Nei Webhusaiti RFPs Isingashande
Chipiri, May 14, 2013 Wednesday, May 15, 2013 Michael Reynolds
Sezvo a digital agency mune bhizinesi kubvira 1996, takave nemukana wekugadzira mazana emawebhusaiti emakambani uye asiri epundutso. Isu takadzidza zvakawanda munzira uye takatora maitiro edu kumushini wakazorwa mafuta.
Maitiro edu anotanga ne webhuruu webhuruu, iyo inotibvumidza isu kuti tiite yekutanga prep basa uye nyundo kunze ruzivo nemutengi tisati tasvika kure zvakanyanya mumugwagwa wekutora nekugadzira.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti maitiro aya anoshanda chaizvo chaizvo, isu tichiri kusangana neiyo inotyisa RFP nguva nenguva. Pane chero munhu anoda RFPs? Handina kufunga kudaro. Asi zvakadaro vanoramba vari tsika yemasangano ari kutsvaga pekutanga kana vachida chirongwa chewebhu webhusaiti.
Heino chakavanzika: Webhusaiti RFP haishande. Izvo hazvina kunaka kumutengi uye hazvina kunaka kune iyo agency.
Heino nyaya inoratidza izvo zvandiri kutaura nezvazvo. Sangano munguva pfupi yapfuura rakauya kwatiri richitsvaga rubatsiro newebhusaiti yavo. Ivo vaive neRFP yakaiswa pamwechete pane yakatsanangurwa yakajairwa seti yezvinhu, zvimwe zvakasarudzika zvikumbiro, uye zvakajairwa zvishuwo zvinyorwa zvinhu (kusanganisira yakanaka yekare chiyero: "tinoda kuti yedu nyowani webhusaiti ive nyore kufamba").
Parizvino, zvakanaka. Nekudaro, isu takatsanangura kuti maitiro edu anotanga neepurani webhusaiti, iyo yakagadzirirwa kutipa zvishoma zvekubvunza, kuronga, uye saiti mapping nguva tisati tazvipira kumutengo. Vakabvumirana kuisa RFP kwechinguva kudivi uye kutanga nepurani uye isu takarohwa zvinhu.
Panguva yemusangano wedu wekutanga wepurani, takachera mune zvimwe zvinangwa, tikabvunza mibvunzo, tikakurukura zviitiko zvekushambadzira. Panguva yekukurukurirana kwedu, zvakave pachena kuti zvimwe zvezvinhu muRFP zvaive zvisisade kana isu tangopindura mimwe yemibvunzo yavo uye tikapa rairo yedu zvichienderana nemakore echiitiko.
Isu takafumurawo dzimwe pfungwa nyowani dzisina kana kubatanidzwa muRFP. Mutengi wedu akafara zvakanyanya kuti isu takakwanisa "kugadzirisa" zvavanoda uye nekuona kuti tese tanga tiri papeji rimwe chete maringe neicho chirongwa.
Pamusoro pezvo, takaguma tachengeta mari yemutengi. Dai isu takataura mutengo zvichibva paRFP, isu tingave takaiisa pane izvo zvange zvisina kunyatsokodzera musangano. Pane kudaro, takabvunza navo kuti tipe dzimwe nzira dzaive dzakaringana uye dzinodhura.
Isu tinoona chiitiko ichi kasingaperi, ndosaka isu takazvipira kwazvo kuhurongwa hwehurongwa uye nei tisingatende muwebhusaiti maRFP.
Heino dambudziko rakakosha neRFPs - iwo akanyorwa nesangano achikumbira rubatsiro, asi ivo vanoedza kufanofungidzira mhinduro dzakakodzera. Unoziva sei iwe kuti unoda chigadzirwa chekugadzirisa wizard? Une chokwadi here kuti iwe unoda kusanganisira yenhengo-chete nzvimbo? Sei wakasarudza chinhu ichi pane icho chikamu? Izvo zvakaenzana nekuenda kuna chiremba kunowana kuongororwa uye kurapwa, asi kukumbira imwe chaiyo mishonga usati watomboshanyira hofisi yake.
Saka kana iwe uri kuronga nyowani webhusaiti chirongwa, ndapota edza kutyora iyo RFP tsika. Tanga nehurukuro nekuronga ne yako agency (kana inogona kuita agency) uye tora nzira inonamira kune yako webhusaiti chirongwa. Yakawanda yenguva iwe yaunowana kuti iwe unowana iri nani mhedzisiro uye iwe ungatombo chengetedza imwe mari!
Kugadzirira Bhizinesi Rako reVhidhiyo Vhidhiyo
May 14, 2013 pa 5: 25 PM
Ini handibvumirani. RFPs haisi zano rinotyisa chete kune mawebhusaiti, ipfungwa yakaipa kune chero chirongwa.
Zvikonzero ndezvawataura pamusoro. Asi hezvino zvikonzero zvakanyanya kukosha nei maRFP asingashande: vanofungidzira kuti mutengi akatoita zvese zvitsva.
Kana iwe uchikwanisa kugadzira pasina rubatsiro, saka izvi zvinotii nezve maonero ako pane iyo rubatsiro iwe yaunofunga iwe yaunoda?
May 15, 2013 pa 1: 48 PM
Kutenda nemhinduro, Robby! Hongu, ndinobvuma… ini ndangoda kuomerera pane zvandinoziva 🙂
May 14, 2013 pa 6: 29 PM
Ini ndichapa chirevo chakanangana neRFP yewebhu webhusaiti, asi zvinoda mari hombe kwazvo nemutengi sezvo isu tingave nehukama hwakaenderera kupfuura basa reprojekti.
May 15, 2013 pa 7: 51 AM
Ditto zvakataurwa naRobby.
May 16, 2013 pa 11: 47 AM
Wagona kutaura. Izvi ndezvechokwadi kune mawebhusaiti… uye chero chimwe chigadzirwa kana sevhisi isiri chinhu chakazara. RFPs dzinoedza kuyera zvinhu (saka tinogona kuzvienzanisa mune rakashambadzirwa) izvo zvinoshora quantification. Kunze kwekunge iwe uchikumbira makotesheni pane, iti, njanji mota yematare esimbi (uye pamwe not kunyange ipapo!), Unofanirwa kutsvaga vatapi vaunovimba uye uchivatendera kuti vave vanachipangamazano pane izvi. Zvikasadaro, mhedzisiro yacho ndiyo "inotaridzika zvakanaka pabepa," asi isingashande mushe mushe.
May 16, 2013 pa 12: 43 PM
Zvide! Ndatenda, Chris.
May 16, 2013 pa 12: 23 PM
Mhedziso: Vazhinji veVatengi havanyatso kuziva zvavanoda, asi kupfuura zvese havazive zvavanoda …… evhangeri yekusingaperi kubva kumasangano… ..